thet lwin၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Maletaunggyi shan ststeMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ thet lwin's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
thet lwin သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
နီစံ (အနီ) leftacomment for thet lwin"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
မိမိမေလ်းထဲမှ…"Jul 29, 2012thet lwin ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Jul 28, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
12:06am အချိန်May 1, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 7:40am အချိန်July 29, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
5. တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …
6. ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
7. " မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ရောနှောလောင်းလှူသည့်ဆွမ်း"
8. အရှင်မောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီး အလောင်းတော်, တရားထူးရသွားသော တရားတော်။
9. နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်
10. ၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း
11. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
15. ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....
17. သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။
18. "၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"
19. သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး
Top News · Everything ဖိုးကံထူး commented on ဇော်ထက်မောင်'s blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်တွင်းရှိ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူများ (မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ) သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာ'"ဟုတ်ကဲ့ပါမရေးးတက်လို့ကိုမရေးဘူး စာပဲဖတ်တယ်"42 minutes agoKO KO commented on နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s blog post 'လောကကို နွေးထွေးစေတဲ့ လက်အစုံများ'"မှတ်သားထိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။"1 hour agoKO KO liked နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်)'s blog post 'လောကကို နွေးထွေးစေတဲ့ လက်အစုံများ'1 hour agoKO KO liked AShin KoSalla's blog post 'ကိုးကွယ်မှန်မှ ချမ်းသာရ တရားတော်'1 hour agoKO KO liked thein wai's blog post 'ဗုဒ္ဓဟောကြားသော လူတိုင်းအတွက် ဘ၀ခရီးလမ်း ရွေးချယ်ရာဝယ်(ကေသမုတ္တိသုတ်)။'1 hour agoyarmoe postedaphoto ပြည်နယ် E I အဖွဲ့နဲ့အျမှတ်တရပါ1 hour ago 0
saw htwe postedadiscussionသံသရာခရီးသံသရာ၏ အစ နှင့် အဆုံး ဘယ်ဟာက ပိုရှည်သနည်း၊ ဆွေးနွေးပေးကြပါ။See More1 hour ago 0
yarmoe leftacomment for ဇော်ထက်မောင်1 hour agoSoe Min liked Thaung Tan's blog post 'ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ'1 hour agoyarmoe liked ဇော်ထက်မောင်'s profile2 hours agoyarmoe liked ဇော်ထက်မောင်'s blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်တွင်းရှိ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူများ (မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ) သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာ'2 hours agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'ကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ်'2 hours ago More... RSS